Ndi Apollonius nke Tyana bu onye Christ n'ezie? - Afrikhepri Foundation
Welcome UZI NA NDỊ EZIOKWU
Ndi Apollonius nke Tyana bu ezi Kraist?
min gụọ 4 min
N’oge Kristi nke Oziọma ndị ahụ dịrị ndụ, enwere ọtụtụ “Kraist” ndị ọzọ n’Eshia Maịnọ na nke dị nso n’Ebe Ọwụwa Anyanwụ, nke a bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ ihe na-akpọsa akwụkwọ na-akpali akpali, nke Robert Laffont bipụtara. Parisi, Egiptologist, Jean Louis Bernard. Akwụkwọ a, isiokwu ya bụ: "Apollonius nke Tyana na Jizọs", gbadoro ụkwụ n'ọmarịcha akwụkwọ ndekọ nke nwere nkọwa dị oke egwu banyere Jizọs, ọrụ ọhụụ, akaebe mgbe ochie, ọkachasị na ọrụ dị mkpa, ụdị ozi ọma. n'ụzọ nke ya:
"Ndụ nke Apollonius nke Tyana" site n'aka onye edemede Greek bụ Philostratus, amụrụ na Lemnos n’ihe dị ka afọ 175 AD.
Apollonius a mụrụ na Tyana nwekwara ndị na-eso ụzọ ya, ndịozi ya na ya onwe ya bụ onye na-eso ụzọ Pythagoras na onye nketa nke ihe omimi nke Egypt. Ọ dị mma ịmara na n’oge ahụ, a na-ejikarị okwu ahụ bụ "Kraịst": n'asụsụ Grik, "Çhrestos" na "Christos" pụtara: "ndị dị mma, ndị e tere mmanụ". Ma okwu a sitere na igwe okwu nlere anya nke Egypt nke “khery-cheta”. “Onye nke kachasi ihe nzuzo”, “ibido”
Kaosinadị, Apollonius bụ otu n'ime mbido ndị a, ụdị asọmpi nke onye Aramaic Jizọs bụ onye mmepe anya Ndị Kraịst anyị “jikọtara”. Le Petit Larousse kpọrọ ya “onye ọkà ihe ọmụma Pythagorean na onye ọrụ ebube, onye Philostratus kwuru na ọ bụ ọrụ ebube ndị ndị ọgọ mmụọ tinyere na nke Jizọs Kraịst”.
Obere ụgbọ mmiri dị omimi
N'ezie, Apollonius ghọrọ ama ama nke na akpọrọ ya, n’oge ahụ, "onye ọrụ ebube nke alaeze ukwu". Otodi, site na mgbasa nke ozioma, a ghabara ya n’ime ndo, ebe a na-ebute Kraist Aramaic. Nzuko, tinyekwara ike ya niile n’ime ya, na-dabere n’agbanyere ya Ozizi anọ anyi matara (n’agbanyeghi na edere ede); site n'ime nke a, o jiri aka ya chefuo ọtụtụ akwụkwọ Ozi Apọkrịfa (ekwenyeghị na nke ahụ), na-ekwenyeghị na ndụ Jizọs “dịka anyị siri chọọ”, ezigbo, ịgakọrịta na nke na-eme ka mmadụ kwenye.
Apollonius, na narị afọ nke XNUMX AD, ka akọwara na akụkọ akụkọ nke ndị Gris na Rom. Ihe kpatara igwe ihe omimi na-eme ka ọ daba na igbachapu anya bu ihe anyi n’eche n’iru. Iso Christianityzọ Kraịst Nwere Ntọala Abụọ? Ejikọtara akụkọ ha abụọ n'okpuru aha otu? N'ọnọdụ ọ bụla, nsogbu nke njikọ dị n'etiti mkpụrụ okwu abụọ ahụ na-ewe oke mkpa.
Apollonius chigharịrị ịdị adị pụrụ iche, gafere obodo ukwu nke oge ya, Rome, Alexandria, Antiọk ma kwalite ọchịchọ ya maka amamihe na Egypt na India. Ndụ ya bidoro na nkwuputa okwu: nn oo anya nye nne ya nke chi Ijipt nke buru amuma banyere nwa nke chi. Mgbe ọ gbara afọ asaa, enyefe ya n’aka onye nkuzi; na iri na anọ, ọ gara Tasọs (ebe ọ matara Paul), wee gaa Aegean ebe ọ gụrụ akwụkwọ n’ụlọ nsọ Asclepius ebe ọ chọpụtara onyinye ya nke ọgwụgwọ na nchọpụta ọrịa. Nkà ihe ọmụma, ọ nakwere echiche Pythagorean. Ọ bụkwa clairvoyant, mage, ọkà mmụta mmụọ. Ebe ọ bụla ọ gara, ọ na-arụ ọrụ ebube sitere na sayensị nzuzo ya, na anyị na-akpọ ọrụ ebube. Ọ na-ebi ndụ dị mma na ọ bụ onye anaghị eri anụ. Ọ ga-ụkwụ ọtọ, na-eyi uwe linin, na-enwekwa ntutu dị ogologo. Na mgbe nna ya nwụrụ, ọ ketaara akụ na ụba ya, hapụrụ nwanyị ahụ. Ruo afọ ise, o si n’obodo ruo n’obodo mechibidoro ịgbachi nkịtị.
Mgbe ọ maliteghachiri ibi ndụ ọha mmadụ, ya na ndị ụkọchukwu tụgharịrị uche na chi, ya na ndị na-eso ụzọ asaa n'akụkụ ya. Na njem ya, ọ na-akpọrọ ndị odibo abụọ na otu nyocha. Na Nineveh, ọ zutere Damis, onye Asiria nke ga-ekwesị ntụkwasị obi nye ya ruo mgbe ọ nwụrụ. Na-agafe na Babilọn, ọ katọrọ giganticism nke obodo a ga-a suụju (nke ga-eme ka anyị chee echiche banyere nnukwu obodo anyị ugbu a!). N’ọnụ ụzọ alaeze a, a jụrụ ya ihe o nwere ikwu. Ọ na-aza, sị, "Ihe bara uru, ikpe ziri ezi, njide onwe onye." “Ndị Ohu?” anyị jụrụ ya. "Ee e, nnukwu ụmụ nwanyị!". Nye Eze onye natara ya, ọ na-ekwupụta, sị: "Oké ihe mwute dị na Sage karịa ụkọ ihe na-eju gị anya, gị onwe gị, Ọkaakaa."
Eze Ukwu Domitian, onye kpọrọ Apollonius asị, tụrụ ya mkpọrọ ma malite ikpe ikpe siri ike. Ọ gbanahụ, anyị ahapụ ụzọ ya. Anyị hụrụ ya nso Efesọs ebe ọ nwụrụ mgbe ọ kara nká. Dị ka Aramaic Christ, ọ pụtara “onye na-ekwu okwu ọnwụ” ọtụtụ oge na n'ọtụtụ ebe, nke mezuru iji mee ka onye ahụ bụrụ onye a ma ama n'etiti ọha mmadụ. Onye ama ama ama, nke riri nne nke uku, rue John John Chrysostom, nogidere ya megide ya ozo na 4gbo ano, na-aga n’ihu agha ya ma na-akpo ya, tinyere ihe ndi ozo, na-aghugho na onye nke ekwensu?
N’ezie, odi nkpa igbutu “Kristi” Greek a, maka odi nkpa, iji wulite ma mee ka odi otu Kristi n’otu siri ike.
Akwụkwọ akụkọ "La Suisse" 1980
Na Machị 10, 1893, Onye isi ala France bịanyere aka n'akwụkwọ na -eme ka ọchịchị nke Côte d'Ivoire